सबैले नबचाऊँ..मार्देऊ भनेका थिए, हरिकाजी ढुँगानालाई ! हात खुट्टा गुमाउनुअघि यस्ता थिए (भिडियो हेर्नुस) – PathivaraOnline
Home > समाचार > सबैले नबचाऊँ..मार्देऊ भनेका थिए, हरिकाजी ढुँगानालाई ! हात खुट्टा गुमाउनुअघि यस्ता थिए (भिडियो हेर्नुस)
admin January 29, 2019 समाचार	0
बाग्लुङमा घट्यो भर्खरै यस्ताे दुःखद खबरः एक्कासी जीप ७ सय मिटर तल खसेपछि यस्तो!
कोशी बाँधकै कारण फेरि ९० नेपाली घरपरिवार खतरामा! किन दादागिरी देखाउँछ भारत सधै?
मनसुनकै कारण नेपालमा यस वर्ष ठूलो मानवीय क्षति! हेर्नुस्
एक लाख भन्दा बढीको परीक्षण रिपोर्ट नै ‘नक्कली’१ महामारीको नाममा ठूलो घोटालाको रहस्य खुल्यो
महोत्तरीको सुनचाँदी पसलमा गो’ली प्र’हा र : पसल मालिक र परिवार घाइते, सबै सुनचाँदी लगियो